I-Sweet Water Hideaway Guest House - I-Airbnb
I-Sweet Water Hideaway Guest House
338 okushiwo abanye
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jamie And Joey
U-Jamie And Joey Ungumbungazi ovelele
Jabulela ukuthula nobuhle bendlu yethu yasemaphandleni, eyakhiwe ngokwezifiso, ne-eco-friendly w/isitezi esizimele ne-BBQ endaweni eyihektare elingu-1 enomfudlana wonyaka wonke. Sikumamayela angu-2 ukusuka e-Crowley Lake futhi sihlala ekamu lezinhlanzi endaweni lapho izilwane zasendle zizulazula khona nokwamukela amabala zenza ikhefu. Sihlala kule ndawo, sibeka uthando oluningi endlini yethu yezivakashi, futhi siyakujabulela ukwabelana ngamathiphu endawo. Sicela ulandele imithetho yethu yasekhaya kanye nezinqubomgomo zokuqaphela umhlaba.
Indlu yethu yezivakashi yasemaphandleni yakhiwe nguJoey futhi inhle kakhulu inamakhabethe enziwe ngokhuni lwe-cherry, izitezi ze-oki ezigaywe ngesandla, umsebenzi omuhle wamathayela, amafeni ophahleni, amafasitela anamapulangwe kabili kanye nokuthintwa kothando kukaJamie kuyo yonke indawo. Ukungenisa izihambi kuyisipho nodumo lwethu. Sinomqondo wemvelo futhi siyazazisa ngempela futhi sikhetha ngokwethembeka izivakashi ezisisiza sisebenzise kabusha futhi silondoloze izinsiza zemvelo.
Kukhona ikhishi eligcwele, isitofu sokhuni (sihlinzeka ngezinkuni), igumbi lokuhlala, ikamelo lokulala elikhulu, igumbi lokugezela eligcwele, kanye nedeskithophu yangaphandle yangasese ene-BBQ. Ikhishi linesitofu/uhhavini ogcwele usayizi ogcwele, i-microwave, nesiqandisi futhi ihlanganisa izinto zokupheka, amapuleti ware, izitsha, i-toaster, umenzi wekhofi, ibhodwe lokuphakela, i-blender, njll. Igumbi lokugezela linobhavu neshawa, nomsebenzi wamathayela wangokwezifiso.
Igumbi lokulala likhulu ngokwedlulele linombhede wenkosi owubukhazikhazi, izindawo zokulala ezimbili, itafula lomthwalo wakho kanye nesembatho. Olunye uhlangothi lwekamelo lokulala linombhede ogcwele, indawo yokulala eyodwa, ishalofu lezincwadi kanye ne-rocker (kulabo abancane abazokwenza). Sinesikrini se-bamboo esitholakalayo uma ufuna ubumfihlo obuningi ekamelweni. Kukhona usofa wesikhumba egumbini lokuphumula kanye nezingubo zokulala ezengeziwe. Sinesistimu yokushisisa ekhazimulayo yaphansi, yingakho singakwazi ukuvumela izilwane ezifuywayo. Isitofu esivuthayo sezinkuni kanye ne-heater kagesi ekamelweni lokulala kwakha indawo ethokomele.
Siye saqikelela ukungeza izinsiza ukuze senze ukuhlala kwakho kujabulise kakhulu njengezinongo eziyisisekelo, ibhotela, amafutha omnqumo, ikhofi, ushukela kanye netiye leqabunga eliphilayo elivela e-Oshala Farms (ephethwe umzala kaJamie u-Elise Higley eningizimu ye-Oregon) ukuze uphuze ezitsheni zobumba. lokho u-Jamie akuphonsele khona (kuyatholakala ukudayiswa). Sihlinzeka ngezikhwama zokuthenga zamaseyili, ubhaka, izihlibhi, abalimi bendawo kanye nezinkuni. Izivakashi zingaba nemililo kuphela lapho sikhona. Ngeke kube khona imililo evuthayo emoyeni noma ngezinsuku zefulegi elibomvu. Isikhathi.
Le ndlu yezivakashi iseduze kakhulu ne-John Muir Wilderness edolobheni elincane lase-Crowley Lake, lapho indawo yethu yokudlela okuwukuphela kwayo, i-Toms Place, ivala ngo-8pm. Izinyamazane nebhele ziyafika endaweni yethu ngakho-ke sicela uhlanze noma yikuphi ukudla emotweni yakho lapho ufika futhi ukungenise endlini. Njengomthetho we-Mono County mayelana nokuqashiswa kwasebusuku, njengababungazi kufanele sihlale kule ndawo, esikwenzayo kodwa alukho udonga olwabiwe, ngakho-ke sobabili sinobumfihlo.
Ngeke ibe khona insizakalo yansuku zonke.
Siqinile mayelana nokungabhemi kwethu, akukho nqubomgomo yezilwane ezifuywayo kanye nenqubomgomo yethu yokuhlola Siyabonga ngokuqondisisa.
4.99 out of 5 stars from 338 reviews
4.99 · 338 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-338
I-Crowley Lake iyidolobha elinokuthula elinabantu abangaba ngu-700. I-13,000+foot Eastern Sierra inikezela ngengemuva entshonalanga kanye nomhlaba, kanti umcengezi kanye neziNtaba eziMhlophe zisempumalanga. Uma ukhohlwe okuthile, kunesitolo sasemaphandleni esingaba yikhilomitha ukusuka lapho sivula ngo-6am sivale ngo-8pm. Uma uya, qiniseka ukuthi uyamtshela ukuthi sikuthumele lapho ukuze uthole amakhekhe e-HOMEMADE amasha, amasemishi, ama-burrito asekuseni noma i-pizza. I-Toms Place iyindawo yokudlela eseduze kakhulu eqhele ngamamayela amahlanu futhi ivala ngo-8pm. Uma ufika sekwephuzile futhi ungadlile, uzodinga ukushayela uye e-Mammoth Lakes ukuze uthole indawo yokudlela evulekile noma isitolo, esiqhele ngemizuzu engu-20, uma isimo sezulu sivuma.
Ibungazwe ngu-Jamie And Joey
Siyathanda ukuhlangana nabantu abasha nokwabelana ngezindaba. Futhi siyaqonda ukuthi ubudlelwano nababungazi akuyona into efunwa yiwo wonke umuntu, ngakho-ke sivumelana nezimo ngokuphelele. Sihlala kule ndawo, ngakho-ke ungasibona endleleni noma emfuleni. Noma senezela ekulimaleni kwaleli zwe elihle esihlala kulo. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ngendlela oyifisayo ukuvakasha kwakho noma nini lapho sikwazi khona. Besiphethe kusukela ngempelasonto yoSuku lweSikhumbuzo ka-2016 futhi sibhukhe okungenani u-90% wesikhathi ngokubuyekezwa kwezinkanyezi ezingu-5 yisinye isivakashi. Sibheka ukusingathwa njengomsebenzi wakudala futhi ongcwele futhi sethemba ukuthi "irekhodi" lethu lifaka ukusethemba kanye neqiniso lokuthi uzoba nolwazi olumangalisayo e-Sweet Water Hideaway. Sibheke ngabomvu ukuhlangana nawe.
Siyathanda ukuhlangana nabantu abasha nokwabelana ngezindaba. Futhi siyaqonda ukuthi ubudlelwano nababungazi akuyona into efunwa yiwo wonke umuntu, ngakho-ke sivumelana nezimo ngok…
UJamie And Joey Ungumbungazi ovelele